Mashruuca Biyo-goynta San Antonio River, Daraasadda Kiiska Soo-Celinta Xeebta
Buenaventura Bay, Kolombiya
Qorshaynta aragtida walaxda
Mid ka mid ah codsiyadii ugu horreeyay ee tuubo-doonka ee Kolombiya wuxuu ahaa dhismaha jasiirado go'an oo xaddidan oo loo isticmaali doono xiritaanka iyo hoos-u-dhigga alaabada dayactirka alaabada-qurxinta leh.
Mashruucu wuxuu ku yaalaa San Antonio Inlet, Buenaventura, Kolombiya. Aagga qashin-qubka ee alaabada leh waa midkii ugu horreeyay ee laba jasiiradood oo qaab muuqaal leh oo qaabeysan oo laga qorsheeyay deegaankan webiyada iyo deegaanka wanaagsan. Qaabkan cusub ee qaab dhismeedka cusub ee wax soo saarka leh wuxuu ku lug lahaa tuubbooyinka hawo ahaan ku buuxiya walxaha ciid ka buuxo.
Tuubbooyinka juquraafi ahaanta waxaa loo meeleeyay dhamaadka si ay u dhammaystiraan si ay u bixiyaan cabbir wareeg ah oo loogu talagalay xakameynta walax kala duwanaanta xNUMX m laba jeer maalintii.
Kadib jasiiradaha qaab-qaabeysan ayaa la dhammeystirayaa waxay u adeegi doonaan sidii xarumo wax lagu haadiyo oo alaabay ilaa ay ka buuxsamaan oo ay xasiliyaan. Kadib xasilinta waxaa lagu dhex beeri doonaa geedaha Mangrove iyo dhir kale oo asal ahaan waxaana loo isticmaali doonaa si gaar ah ujeedooyinka deegaanka.
Muuqaalka muuqaalka ee naqshadeynta tuubbooyinka tuubo-dhuleedka
Mashruuca xakameynta walaxdu waxay ku taal meel u jirta 8.0 km gudaha magaalada xeebta ku teedsan ee xeebta ku teedsan ee loo yaqaan 10 m oo ah marin maareyn qoto dheer oo u adeegta qaybta koonfureed ee jasiiradda Buenaventura. Horumarinta dekedaha cusub ayaa sababay baahi loo qabo qoto-dheer oo shaqo, qulqulka dayactirka, iyo meelo kale oo lagu qubo. Aagagga haatan jira ee lagu daadiyey ayaa ka buuxsamay ama ka sii xumaaday dayactir iyo qaab-dhismeed aan ku filnayn.
Isku dayga lagu dhisayo aag qashin qubka iyadoo la isticmaalayo sibidhka iyo geedaha dhagaxa ka buuxaan ee ku dhow magaalada Buenaventura ee San Antonio Inlet ayaa looga tagay sababo la xiriira duruufaha deegaanka iyo aasaaska awgood. Meel kale oo lagu qubo oo ku taal webiga dusheeda aag loo qorsheeyay Port of Solo waxaa lagu dhisay iyadoo la adeegsanayo jawaanno yaryar oo ciid ah laakiin waxaa si buuxda uga buuxsamay agab dayactir ah oo aan hadda ku sii shaqeynayn.
Ogolaashaha in lagu dhiso xarumo lagu keydiyo qashin qubka ee alaabada cagaaran ee midib leh ee Kolombiya ayaa noqotay mid aad u adag maxaa yeelay caqabadaha deegaanka ee dowladaha maxalliga iyo gobolka. Jidadka mareega ee u socda aaggan si joogto ah ayaa loo daadiyaa. Beddelka qashin-qaadka ayaa ku xaddidan aagagga hore ee daadinta durugsan ama gaadiid 80 km ka baxsan xeebta Badweynta Baasifigga.
Gaadiidka iyo ku tuurida badda gudaheeda looma tixgelin inay yihiin kuwo dhaqaalo ahaan macquul ah marka la barbar dhigo jasiiradaha tuurista ee laga dhisay tuubbooyinka dhuxusha.
Dhowr waxyaabood oo kale oo ay ka mid yihiin dhismaha meelaha qashin-daadinta iyo daadinta wabiga ku agdhow kanaalka marinka ayaa la kulmay welwel laga qabo deegaanka oo lama oggola.
Meelaha qashinka daadku ka kacay ee dhul-gariirka ahaa ma ahayn ikhtiyaar sababta oo ah waxyeelada ka soo gaarta geedaha Mangrove, xaaladaha aasaaska oo liita, iyo dhul xaddidan. Dhismaha dikes-ka ee qalabka aasaasiga ah ee liita, biyo furan oo leh cabbirro dhererkoodu sarreeyo oo ah 4.0 m laba jeer maalintii looma tixgelin inay farsamo ahaan macquul tahay iyada oo aan la isticmaalin tuubooyinka dhuunta-dhuleed.
Wareegga '1100 m' oo ah qaab jasiirad qaabkeedu qaabeysan yahay ayaa loogu talagalay in lagu yareeyo carqaladeynta wabiga webiga. Aagagga qaababka miyir-qabka leh ee qaab-qaabeysan ayaa loo qaabeeyey iyadoo la adeegsanayo wareegga 20 m, 3.0 m tuubbooyinka sare ee loo yaqaan 'geotextile tubes' oo laga sameeyay GT500 silig polypropylene geotextile dhar ah.
Dharkani wuxuu leeyahay cabbir furitaan ah oo ah 0.425 mm iyo xoog balaaran oo gantaal culus oo mashiinka ah iyo jihada iskutallaabta ah ee 70.0 iyo 96.3 KN / M siday u kala horreeyaan. Awoodda seam waxay ahaayeen qiyaastii 50 illaa 60% qiimayaashan.
Dhererka 3.0 m tuubooyinka dhuleedku waxay ka kooban yihiin qiyaastii 22 m3 halkii mitir xariiq ee walxaha la jeexay. Aagga qashin-qaadka hore wuxuu ahaa qiyaastii 200 m ballaaran iyo 300 m oo dherer ah kan labaad wuxuu noqon doonaa qiyaastii 300 m ballaaran iyo 600 m dherer ah oo waxaa lagu qiyaasey inay ku jiraan qiyaastii 200,000 iyo 600,000 m3 ee alaabta dayactirka siday u kala horreeyaan.
Qorshaha dhismaha wuxuu ahaa in lagu buuxiyo kow iyo toban 100 m tubo dheeriyadeedka geesaha leh aalado ciid ka samaysan oo laga soo qaado kanaalka marinka si loo sameeyo tuubada wareega wareega ee aagagga qaabaynta badda.
Tuubbooyinka loo yaqaan 'geotextile tube' ee ku habboon isugeynta la soo jeediyey ayaa si ku meelgaar ah loo xirey inta lagu gudajiray buuxinta dhererkooda 4.0 m ee dherarka dheer ee lagu dhejiyay xargaha nylon-ka ee la soo saaray geeskasta ee tuubbooyinka joodiyaha.
Isku daygo buuxinta bilowga ah waxay dhalisay agab aad u tiro yar oo khafiif ah dhammaadka fog ee xNUMX m dhererka joodariyaalka iyo isbeddelada tooska ah ayaa sababay in tuubadii hore ee joomatari ay si xoogaa yar uga baxdo iskujeedinta la soo jeediyey. Si loo yareeyo saameyntan tuubooyinka qalliinka waxay ka buuxsameen kororka 100 m iyadoo ciid leh qaybta aan buuxin ay ku nasanayso foosto yar ilaa xNUMX m ee xiga ee tuubbooyinka loo yaqaan 'geotextile tube' loo baahan yahay.
Markii hore, qandaraasluhu wuxuu adeegsaday Ellicott® Brand Series B890 dredge, "Don David", laakiin wuxuu la kulmay dhibaatooyin qaar ka mid ah inuu ku haayo tuubooyinka geotextile meel ka baxsan qulqulka qulqulka 1.2 m / labaad. Tan waxaa keenay tuubooyinka geotextile oo lagu buufiyey 2.200 m3 oo biyo ah hal saac ka hor inta aan la hayn culeysyo adag oo culeyskooda culeys ka dhigaya.
Muuqaalka tuubada dhuuban ee la buuxiyay
Tan waxaa lagu xaliyay iyada oo lagu badalay taxanaha B890 ee dhererka 12 inch (305mm) Ellicott® Brand Series 370 cutterhead dredge, "Doña Sara" oo leh 100 m oo ah khadka soo deynta. Iyada oo yaraanta yar, dhammaan biyaha xad-dhaafka ah waxaa lagu miiray marada iyadoo inta hartay ee buuxisayna ay dayactireyso tuubooyinka geotextile ilaa ay ka dhigto ciid ku filan oo miisaankeedu hooseeyo.
Dhisida weelka cimilada wareega cimilada ee moodeelkii ugu horeeyey ee qaab dhismeedka weelka duugga ah ayaa si guul leh lagu dhammeystiray guga haatanna waxaa loo isticmaalayaa aag qashin qubka. Dhismaha aagga qashin-qaadka ee nooca labaad leh ayaa dhowaan bilaabmi doona.
Adeegsiga tuubbooyinka loo yaqaan 'geotextile tubbo' si loogu sameeyo mashiinka wareega wareega ee weelka alaabada ku haray waxay cadeeyeen inay yihiin wax dhisan, oo farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaan macquul ah. Dhisidda aagga qashin-qubka wejiga lagu guuli lahaa kuma guuleysan lahaa haddii aan la isticmaalin tuubbooyinka loo yaqaan 'geotextile tubbo'.
Waxaa laga soo xigtay Macdanta & Dhismaha Daadinta Adduunka
Waxaa qoray Jack Fowler, Ph.D., PE, Geotec Assocs., Vicksburg, MS
Eduardo Martinez, Pres., Dragados Hidraulicos, Bogota, Kolombiya
Nicolas Ruiz, Injineerka madaniga ah, Bogota, Kolombiya
Carlos Ortiz, Bogota, Kolombiya